लकडाउनमा सार्वजनिक भएका ५ कार | AutoExpress
"Nepal's leading Auto Magazine"
Two wheeler Four wheeler View All
lubricant Tyre Battery View All
Bank Editorial Insurance View All
लकडाउनमा सार्वजनिक भएका ५ कार
भारतीय बजारमा हन्डाईले नयाँ हुन्डाई भेर्ना बीएस–६ सार्वजनिक गरेको छ । हुन्डाई भेर्ना बीएस–६ को सूरुवाती मूल्य ९ लाख ३० हजार ५८५ भारु तोकिएको छ । हुन्डाई भेर्ना बीएस–६ तीन भेरियन्टमा उपलब्ध छ ।
भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न लकडाउन गरिएको छ । लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसायदेखि मानिसको चहलपल पनि बन्द छ । यस्तो अवस्थाले अटोमोबाइल्स उद्योग पनि शिथिल छ । लकडाउनको समयमा भारतमा पाँच नयाँ कार सार्वजनिक भएका छन् । ती कार यी हन्ः
एमजी हेक्टर बीएस–६
भारतीय बजारमा एमजी मोटर इन्डियाले हेक्टरको बीएस–६ डिजल भेरियन्ट सार्वजनिक गरेको छ । एमजी हेक्टर बीएस–६ को सूरुवाती मूल्य १३ लाख ८८ हजार भारु र अधिकत मूल्य १७ लाख ७३ हजार भारु तोकिएको छ । यो एसयूभीको मूल्य बीएस–४ मोडलको तुलनामा ४५ हजार भारु बढेको छ ।
महिन्द्र बोलेरो बीएस–६
भारतीय बजारमा महिन्द्राले बीएस–६ इन्जिनमा बोलेरो सार्वजनिक गरेको छ । महिन्द्र बोलेरो बीएस–६ को सूरुवाती मूल्य ७ लाख ७६ हजार भारु तोकिएको छ । बोलेरोमा १.५ लिटरको ३ सिलिन्डिर युक्त एमहक७५ डिजल इन्जिन छ ।
हुन्डाई भेर्ना बीएस–६
टाटा नेक्सन एक्सजेट प्लस(एस)
भारतीय बजारमा टाटा मोटर्सले टाटा नेक्सन एक्सजेट प्लस(एस) भेरियन्ट सार्वजनिक गरेको छ । टाटा नेक्सन एक्सजेट प्लस(एस) को पेट्रोल भेरियन्टको सूरुवाती मूल्य १० लाख १० हजार भारु र डिजल भेरियन्टको मूल्य ११ लाख ६० हजार भारु तोकिएको छ ।
मारुती सुजुकी सेलेरियो एक्स बीएस–६
भारतीय बजारमा मारुती मारुती सुजुकीले सेलेरियो एक्स बीएस–६ भेरियन्टमा सार्वजनिक गरेको छ । मारुती सुजुकी सेलेरियो एक्स बीएस–६ को सूरुवाती मूल्य ४ लाख ९० हजार भारु छ । सेलेरियो एक्समा १.० लिटरको ३ सिलिन्डर युक्त इन्जिन छ । यो इन्जिनले ६००० आरपीएममा ६६ एचपी शक्ति र ३५०० आरपीएममा ९० एनएम टर्क उत्पादन गर्छ ।
Auto Express isamonthly magazine published and printed in Nepal, Passion and Expertise being its main theme focusing on auto-mobile sector. Auto Express is Nepal’s largest auto media for the automobile
Regd Office: Kupondole, Lalitpur
Marketing Office: New Baneshwor,
CDO Regd No.: 326/072
Managing Director: KamalRaj Poudel
copyright 2020, Auto Express
designed and developed by: creatu developers